IBSA EJJENNOO JARMIYAA ABO BIYYA SUDAAN IRRAA – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooIBSA EJJENNOO JARMIYAA ABO BIYYA SUDAAN IRRAA
Gochaa Mootummaan Itoophiyaa /PPn Hayyu Dure ABO Jaal Daawud Ibsaa mana jireenyaa isaa keessatti Ittisuu, Seeraa ala sakkatta’uu, Meeshaalee elektirooniksii fi maallaqa saamuu fi Miseensotaa isaan walin mana jireenyaa isaanii keessa jiran guuranii hidhuu raawwatame cimsinee balaaleffanna.
Haalli akkanatti hogganoota, miseensotaa fi deggertoota Qabsoo Bilisummaa Oromoo akkasumas Uummata Oromoo irratti raawwatamu QBO duubatti hin deebisuu.
Marni Sirna burkutaaye deebisuuf dhama’u kun Hooggana Kaayyoo Bilisummaa Oromoo galmaan ga’uuf qabsaawota Oromoo wareegama kaffalaa jiran halkan balbala cabsuun itti seenanii reebichaa fi Qabeenyaa saamuudhaan mana hidhaatti guuruun aadaa isaanii tahu iyyuu furmaataa hin ta’u.
Mootummaan akeeka Sirna nafxanyaa dulloomte haaromsuuf dhiiga ilmaan Oromoo fi Saboota cunqurfamoo dhangalaasaa Jira.
Duulli yeroo ammaatti humna alaa ergifatee fi kan keessaatiin Saba Oromoo irratti bobbaafame Oromiyaa dirree lolaa godhee jira. Lubbuu fi qabeenyaa akkaan guddaa ta’e balleessaa jira. Keessattuu humni waraana Eeritiraa fi hidhattooti Amaaraa mootummaa Itoophiyaatiin Oromiyaatti duulchifamanii ajjeechaa, hidhaa fi dhiitamiinsa mirga namoomaa daangaa hin qabne Oromoo irratti raawwachaa jirani. Kun Saboota gidduu godaannisa gadhee kaa’anii darbuu keessaa illee qooda qaba.
Tarkaafii Saba Oromoo fi Saboota Cunqurfamoo biyyattii irratti Sirna bittaa nafxanyummaa diriirsuuf raawwatamaa Jiru duraas dhaabbanna. Uummati Oromoos Tokkummaa isaa Cimsuudhaan, Qabsoo Bilisummaa finiinsuudhaan hafte sirna nafxanyaa dhaala Oromoo gabroomfachuuf wixxifatamaa jiru kana Ofi irraa deebisuuf ka’uun yeroon isaa amma.
Mirgoota Oromoon qabsoo isaatiin argate harkaa buusanii sirna nafxanyummaa Kan bliyya, lafa, qabeenyaa dhuunfachuu, mirgoota aadaa fi afaanii Oromoo balleessanii kan isaaniin bakka nu fudhachiisuu akeeka godhatanii socho’aa jiru.
Kun Eenyummaa fi Sab-boonummaa Oromoo haquudhaan kan Amaaraa kan maadi isaa iyyuu hin beekamne nu fudhachiisuuf haala deemamu dha. kanaaf Oromoon dammaqee ka’uu qaba.
Keessattuu tuffii Saba Oromoo irraa qabaniin hoogganoota QBO dachaasanii hidhanii dararuun, ajjeessuun, Uummata Oromoo ABO, WBO fi KFO deggerte jedhanii hidhuun, ajjeesuun, daraarun, shamarran gudeeduun, qabeenyaa Oromoo saamuu fi gubuun yeroo ammaatti yakka mootummaa fi humnoota alaa seenaniin raawwatamaa jiru dha. kana biraan waajjiroota dhaabota siyaasaa Oromoo / ABO fi KFO Cufuun hoogganoota hidhuu fi uguruun waan bal’inaan itti fufee jiru dha. Kan dhihoo kana Hayyu duree ABO manati Ugguranii namoota waliin jirani hidhaatti naquu fi mana sakatta’uudhaan qabeenyaa saaman haala gaddisiisaa dha. Haalli kun ilmaan Oromoo biyya isaanii keessatti itti duuluudhaan roorroo daangaa hin qabne iraan gahuu dha. Oromoon haala kana keessaa Kan bahu danda’u qabsoo qofaani.
Kanaaf qaanii akka sabaatti halagaan nu irraan gahaa jiru jalaa bahuuf tokkummaan qabsaawuun furmaata.
Nuti Oromoon bakka jirru hundaa kaanee QBO finiinsuudhaan Bilisummaa keenyaa deebifachuutu qaanii akka sabaatti nu irra gahe of irraa muluquu dandeenya. Kanaachii haali as deemaa jiru Kan daranii ti. Kana biraa hoogganoota qabsoo bilisummaa keenyaa tikfaatuu fi waliif birmachuun cimee akka itti fufu dhaammachaa nutis karaa keenyaan dura dhaabbannoo keenya akka cimsinu ibsina.
Haala kanaan ibsa ejjennoo kanatti aanan baafanneerra.
Uggurriin Hayu duree ABO manatti ittisuu, Eyyaama seeraa malee mana isaa sakatta’uu, qabeenyaa saamuu fi namoota isaan waliin galan mana hidhaatti guuruu dabballoota PPn raawwatame ni balaaleffanna.
Maqaa Balleessii Dhaaba ABO fi Ummata bal’aa Oromoo irrati deemaa jiru ni balaaleffanna. Duras ni dhaabbanna.
Hiddhaa, dararaa fi ajjeechaan gaaffii mirgaa sabi gaafateef deebii hin ta’u. Qabsoo Bilisummaa Sabaas balleessuu hin danda’u. Kanaaf Mootummaan hoogganoota, Haayyota, Sabboontotaa fi ilmaan Oromoo yakka malee maqaa gaaffii mirgaa gaafattan jedhuuf sababa Oromummaa qofaan hidhe haal-duree tokko malee akka hiiku gaafanna.
Haalli yeroo ammaatti HD ABO Jaal Dawuud Ibsaa keessaa jiran baay’ee yaaddessaa akka tahe beekamaa dha. Dhiibba akkanatti nama karaa nagaa qabsaawuuf biyyaa fi magaalaa Mootummaan keessa jiru keessa jiraatu irratti ROORROO dabballooti geessisan mootummichi akka irraa dhaabsisu gaafanna. Uumaati Oromoos haala kana jala bu’ee akka hordofu yaadachiisna. Weerarri raayyaa ittisa biyyaa, Poolisii, waraana Shaabiyaa ( Eeritiraa) fi hidhattoota Amaaraatiin Uummata keenya irratti baname Oromoo fi Oromummaa balleessuuf kan akeekame dha. Kana fashalsuuf qabsoon Oromoo Cimee itti fufuu qaba. Haala hamtuu saba Oromoo mudate kana beektotii fi hayyooti Oromoo jaarmiyoota idil_addunyaa, biyyotaa fi jaarmiyoota namoomaa akka beeksisan waamicha goona.
Sabni tokko roorroo of irraa ittisuuf ijaaramuu fi humna tahuun barbaachisaa dha. Oromoonis mirgoota isaa kabachiifachuudhaaf ijaaramee erga lolachuu jalqabee bubbuleera. ABOn WBO ijaaree erga qabsoo Bilisummaa baroota kudhanoota afurii Ol taheera. Ammas haalli karaa nagaa dimimmisaa’uun sochii WBO dirqama godhe. Kanaaf Uummati Oromoo WBO Cimsuuf of qusannoo malee akka hojjetu waamicha goona. Kana biraan weerara Oromoo fi Oromummaa balleessanii biyya Oromoo dhuunfachuuf nafxanyootii fi waraanni Shaabiyaa bobba’e kana doomsuuf Oromoon HUNDI WBO cinnaa akka hiriirru waamicha goona.
Jaarmiyaa ABO Biyya Sudaan.
IBSA EJJENNOO MISEENSOOTA ABO KONYAA ARIZONA Phoenix, Arizona, 11/22/2020 Miseensootni ABO konyaa Arizona walgahii idilee…